अफ्रिकन बालबालिकासँग यी सुन्दर युवतीले गरेको डान्स ८ करोड बढीले हेरे (भिडियो सहित) – List Khabar
Home / मनोरंजन / अफ्रिकन बालबालिकासँग यी सुन्दर युवतीले गरेको डान्स ८ करोड बढीले हेरे (भिडियो सहित)
admin2weeks ago मनोरंजन Leaveacomment 77 Views
भि`डियो हेर्नु पूर्व शरीर फिटनेसको लागि गरिने डान्स जुम्बा डान्सको बारेमा जानकारी लिऔँ ।
जुम्बा डान्स मुभमेन्ट`बाट गरिने फिटनेस थेरापी हो । यो शारी|रिक तथा मानसिक स्वा`स्थ्यका लागि प्रभाव`कारी मानिन्छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो उमेर र अवस्था हेरेर विभिन्न जुम्बाका फर्मुला अपनाउन सक्छन् ।
जुम्बाका प्रकार – जुम्बा विभिन्न थरीका छन् । ‘जुम्बा बेसिक’ नेपालमा सबैभन्दा लोक|प्रिय छ । सिकारू र वृद्ध|हरूका लागि ‘जुम्बा गोल्ड’ उपयुक्त मानिन्छ, हलुका तरिकाले गरिने भएकाले शरी|रमा बढी भार पर्दैन र वृद्ध`हरूले पनि सहजै गर्न सक्छन् ।
पछिल्लो समयमा युवाको रोजाइ|मा पर्ने जुम्बा ‘अक्वा जुम्बा’ हो । जुन स्विमिङ पुलमा गरिन्छ । पानीमा गएर डान्स गर्दा एकदमै धेरै ऊर्जा चाहिन्छ । हरेक मुभमेन्ट गर्न गाह्रो हुने गर्छ । अक्वा|लाई जुम्बाको आधुनिक रूपमा लिइन्छ । पानीमा वर्क|आउट गर्दा बढी शक्ति लगाउनु|पर्ने भएकाले फिट`नेसका लागि एकदमै प्रभाव`कारी हुन्छ ।
बाल`बालिका अर्थात् ७ देखि ११ वर्ष|सम्मका बच्चाका लागि ‘जुम्बा किड्स’ अभ्यासमा ल्याइन्छ । जुम्बामा प्रयोग गरिने गीत र कोरीयोग्राफी पूर्वनिर्धारित हुने गर्छ ।
डान्स विधि – जुम्बा डान्सको समय १ घन्टाको हुने गर्छ । सुरुको समय वार्मअप, त्यसपछि गीतको तालमा कोरियो`ग्राफी मिलाएर डान्स गरिन्छ । डान्सको समयमा शरीर तात्ने र पसिना आउने हुन्छ । त्यसैले १० मिनेट कुल डाउन हुनका लागि छा|डिन्छ । साल्सा, मेरेन्गे, कुम्बिया र रेगेटन जुम्बाका प्रमुख प्रकार हुन् । प्रायः ल्याटिन, स्पेनिस, र अंग्रेजी गीतको रिमिक्स|मा जुम्बा गराइन्छ, कहिले|काहीँ नेपाली गीत पनि प्रयोगमा ल्याइन्छ ।
एक घन्टा जुम्बा गर्दा आठ सयदेखि एक हजार क्यालोरी घटाउन सकिन्छ । गीतको तालमा डान्स गर्ने भएकाले वर्क`आउट गरेको जस्तो अनुभव हुँदैन । फल`स्वरूप छोटो समयमा नै तौल नियन्त्रण`मा ल्याउन सकिन्छ । बच्चादेखि वृद्ध`वृद्धाले सजिलै गर्न जुम्बा गर्न सक्छन् ।
तौल नियन्त्र`णमा राख्नका लागि गर्भ`वतीले समेत जुम्बा गर्न मिल्छ । जुन सामान्य तरिकाले गरिन्छ । जुम्बापछि तनाव`मुक्त भइन्छ । यसले शरीरमा एक`प्रकारको ऊर्जा दिने गर्छ । आलश्यपना, तनाव घटाउँछ । युरिक एसिड, थाइराइड, मुटु|रोगलगायत सम`स्या कम गर्न जुम्बा प्रभावकारी मानिन्छ ।
अफ्रिकन बालिकासँग युवतीको भिडियो हेर्न यहाँ थिच्नु`होस्।
Previous स; म्भो,ग कति मिनेट गरेको राम्रो ? जान्नैपर्ने ४ कुरा !
Next पेट बेला बेलामा गुडुङ् गुडुङ् कराउँछ ? यस्तो हुनसक्छ कारण